Ahoana ny fijerena ny isan-jaton'ny bateria iPhone | avy amin'ny mac aho
Ny modely Apple iPhone farany dia manampy bateria tena mahavariana. Tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity dia ao amin'ny dikan-13 ny iPhone, izy rehetra, anisan'izany ny iPhone mini, ny iPhone, ny iPhone Pro ary ny Pro Max, dia manampy bateria manana fahaleovan-tena tena tsara. Ny ankamaroan'ny mpampiasa an'ity modely iPhone 13 ity dia tsy manana fitarainana momba ny bateria fa Ahoana no hahitana ny isan-jaton'ny bateria amin'ny iPhone?
1 Ahoana ny fomba hahitanao ny salan'ny bateria amin'ny iPhone
2 Mitadiava ary velomy ny isan-jaton'ny bateria amin'ny modely iPhone hafa
3 Ampiasao ny Widget bateria amin'ny iPhone
4 Aza mampiasa rindranasa an'ny antoko fahatelo hahitana ny isan-jaton'ny bateria
Io no iray amin'ireo fanontaniana napetraky ny mpampiasa izay mbola tsy nanana modely iPhone indrindra amintsika. Ary ny orinasa Cupertino dia nanaisotra ny isan-jaton'ny bateria tamin'ny efijery hidin-trano sy ny Home. Amin'izao fotoana izao dia afaka mahita izany ianao amin'ny alàlan'ny swipe midina eo ambonin'ny kisary batterie ao amin'ny foibe fanaraha-maso. Eny, tsotra izany saingy mazava ho azy fa mila mitady an-tsitrapo an'io safidy io ianao hatramin'izay tsy misy isan-jaton'ny batterie hita eo an-tampon'ny iPhones izay misy notch.
Ao amin'ny iPhone 13 sy ny modely iPhone hafa misy Face ID (iPhone X sy aoriana), ny isan-jaton'ny bateria dia miseho ao amin'ny Control Center. Mba hanaovana izany dia mila midina fotsiny ianao avy eo amin'ny zoro ambony havanana amin'ny efijery.
Amin'ireo modely iPhone aloha kokoa noho ireo manana alina raha toa ny isan-jaton'ny bateria dia miseho eo amin'ny efijery lehibe sy mihidy isaky ny manetsika azy avy amin'ny fandrindrana. Ity isan-jaton'ny bateria ity dia tsy maintsy alefa amin'ny tanana amin'ireto modely iPhone tranainy ireto, andao hojerentsika ny fomba hanaovana izany.
Mitadiava ary velomy ny isan-jaton'ny bateria amin'ny modely iPhone hafa
Ho an'ireo mpampiasa rehetra izay manana modely iPhone tranainy tsy misy ny isan-jaton'ny batterie aseho ao amin'ny bar sata amin'ny alina, dia mety tsy aseho ho azy io isan-jato io, ka tsy maintsy ahetsiketsika. Ho azy Mandehana any amin'ny Settings> Battery ary velomy ny "Battery percentage". Raha mampiasa maody herinaratra ambany ianao, dia hiseho foana ny isan-jaton'ny batterie ao amin'ny bar sata.
Mazava ho azy fa miasa ho an'ny iPad sy iPod Touch ihany koa izany. iPhone SE (taranaka faha-2), iPhone 8 na taloha, iPad (modely rehetra), ary iPod touch (modely rehetra) asehoy ity isan-jaton'ny bateria ity eo an-tampony havanana, eo akaikin'ny kisary bateria.
Ampiasao ny Widget bateria amin'ny iPhone
Rehefa avy nilaza izany isika dia afaka mijery ireo modely vaovao miaraka amin'ny alina manomboka amin'ny iPhone X mankany amin'ny modely ankehitriny. Ireo iPhones ireo dia mazava ho azy fa tsy manampy an'io isan-jato io amin'ny bara status iPhone intsony, na dia afaka manampy izany aza izy ireo hatramin'izay kely kokoa ny tady amin'ireo modely vaovao. Na izany na tsy izany, Apple dia tsy mampiditra an'io isan-jaton'ny bateria io, na dia afaka mampiasa widget mivantana aza ianao mba hahitana ny isan-jaton'ny bateria amin'ny fotoana rehetra.
Ity misy fomba haingana hafa hijerena ny isan-jaton'ny batterie anao, miaraka amin'ny Widget Batterie eo amin'ny efijery an-tranonao na ny fijerena anio. Raha te hampiditra ity widget ity dia tsy maintsy mitsambikina miankavanana fotsiny isika, tsindrio eo amin'ny farany ambany izay misy ny hoe manova sy ampio widget vaovao misy marika miampy (+). Indray mandeha eto dia mitady ny bateria ampianay.
Ny tombony amin'ny fampidirana ny widget bateria amin'ny iPhone dia ny fanampin'ny fanomezana antsika ny isan-jaton'ny bateria amin'ny fitaovanay, Izy io koa dia manolotra antsika ny isan-jaton'ny bateria an'ny Apple Watch amin'ny tranga izay ananantsika na ny AirPods, AirPods Pro na AirPods Max.. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny headset sasany toa an'i Jabra, Sudio ary headset tsy misy tariby hafa.
Aza mampiasa rindranasa an'ny antoko fahatelo hahitana ny isan-jaton'ny bateria
Ao amin'ny App Store dia mahita rindranasa an'ny antoko fahatelo isika izay manolotra antsika zavatra mitovy amin'ny fahitana ny isan-jaton'ny bateria an'ny iPhone. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy milaza isika fa tsy soso-kevitra ny hampiasa ity karazana fampiharana ity satria tsy marina tanteraka izy ireo. Na ahoana na ahoana, dia tsara indrindra ny mampiasa ny safidy teratany amin'ny iPhone.
Mety tsy manome ny tena fampahalalana momba ny bateria an'ny fitaovanay ireo fampiharana ireo ary mazava ho azy fa tsy tsara mihitsy izany. Mpampiasa maro no nanandrana fampiharana toy izany ary farany nanala azy ireo tamin'ny fitaovana. androany miaraka amin'ny Ny fahatongavan'ireo widgets Apple amin'ny iPhone amin'izao fotoana izao ary ny safidy hampavitrika ny isan-jaton'ny batterie avy amin'ny firafitry ny fitaovana dia mihoatra noho ny ampy.
Ny olana iray hafa hitantsika dia ny mpampiasa dia variana amin'ny isan-jaton'ny bateria. Mazava ho azy, ny fananana bateria tsara dia manome traikefa mpampiasa tsara kokoa amin'ny fitaovana. courant fa tsy maintsy jerena ny fampiasana omentsika azy ary indrindra ny taonan'ny batterie satria tsy afaka haharitra iray andro izy rehetra arakaraky ny fampiasana azy.
Ny fanalahidy amin'io lafiny io dia ny fampiasana ny telefaona nefa tsy mahafantatra ny isan-jaton'ny bateria izay mitoetra amintsika mandrakariva. Mazava ho azy fa raha mila maika ilay fitaovana isika, dia tsara ny mijery fa tsy midina be loatra izy io, fa tsy tsara koa ny mibanjina azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iPhone » Ahoana ny fomba hahitanao ny salan'ny bateria amin'ny iPhone
watchOS 8.4 RC dia mamaha ny olana momba ny fiampangana Apple Watch